पाकिस्तानको चिया पसलमा भारतीय विंग कमाण्डर अभिनन्दनको फोटो राखेपछि रातारात भाइरल ! | Sindhuli Saugat
पाकिस्तानको चिया पसलमा भारतीय विंग कमाण्डर अभिनन्दनको फोटो राखेपछि रातारात भाइरल !
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ फागुन २९ गते बुधवार काठमाडौं
पुल्वामा घटनापछि भारतीय वायुसेनाका विंग कमाण्डर अभिनदन वर्तमानको चर्चा सर्बत्र चुलिएको छ । भारतका युवाहरुमाझ त अभिनन्दनको जस्तै जुँगाको स्टाइल बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । भारतमा मात्रै नभएर पाकिस्तानलगायत विश्वमा समेत अभिनन्दनको लोकप्रियता चर्चा चुलिंदै गएको छ ।
यसैबीच पाकिस्तानको एक चियापसलमा अभिनदनको फोटो छापिएको छ । अभिनन्दनको फोटोसँगै लेखिएको छ ‘यस्तो चिया जसले दुश्मनलाई पनि मित्र बनाउँछ ।’ मित्रताको उदाहरण पेश गरिरहेको यो फोटो पाकिस्तानको कुन ठाउँको हो भन्ने खुलेको छैन ।
यसअघि विमानबाट पाकिस्तानमा खसेका विंग कमाण्डर अभिनन्दनलाई पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस क्रममा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा अभिनन्दनले चिया पिउँदै थिए र उनले चिया निकै मिठो भएको बताएका थिए ।
यो फोटोलाई पाकिस्तानका उमर फरुक नामका एक व्यक्तिले ट्वीटरमा शेयर गरेका थिए । लगत्तै यो तस्वीर निकै भाइरल भइरहेको छ । यो फोटो शेयर भएसँगै भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव घटाउनुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन् ।
पछिल्लाे - घरमा आगलागी हुंदा ४४ लाखको क्षति
अघिल्लाे - इथियोपियन विमान दुर्घटना: एक नेपाली चेली को मृत्यु भने एक नेपाली युवा बाच्न सफल तर..(भिडियो सहित)